Vashandi Vehutano Vakarohwa neCOVID Kurwira kweMubhadharo Mubatsiro
Kusvika pari zvino, vashandi vaifanirwa kuratidza zvinogutsa kuti vakatapukirwa pabasa. Asi nyika gumi neshanu dzave kufunga kuisa basa pachipatara: Ita kuti zviratidze kuti mushandi haana kuwana chirwere pabasa.
Chimwe chezvinhu zvakawanda zvinoita kuti coronavirus chirwere 2019 (COVID-19) inonetsa kurapa ndechekuti munhu haakwanise kunyatso tarisa kuti kupi kana sei mumwe munhu angave akawana chirwere ichi. Vashandi vehutano vakawana COVID-19 (uye mhuri dzevashandi vehutano vakafa nechirwere) vari kuona kuti kuyedza kuwana vashandi muripo wekubatsira kana kufa kwekufa kunogona kunge kusingakwanisike, Kaiser Health News (KHN) inoshuma nhasi.
Kusvika pari zvino, vashandi vaifanirwa kuratidza zvinogutsa kuti vakatapukirwa vari pabasa, isiri nharo yakapusa yekukunda zvichipiwa kuti kune vatakuri vakawanda kwazvo munharaunda.
Zvino, sekureva kweKHN, nyika gumi neshanu uye Puerto Rico vanoda kuisa zamu pachipatara: zviite kuratidza kuti mushandi haana kuwana chirwere pabasa.
"Mabhiri anosiyana muchiyero chevashandi vavanofukidza," KHN inoshuma. “Vamwe vanochengetedza vese vabva pamba vachienda kunoshanda panguva yekuraira pamba. Zvimwe zvinogumira kune vekutanga vanopindura uye vashandi vehutano. Vamwe vaingovhara vashandi chete vanorwara munguva dzechimbichimbi, nepo vamwe vanozotora nguva yakareba. ”
Nyika dzakasiyana dziri kutora nzira dzakasiyana, uye dzimwe dzenzira idzi dziri kupikiswa nezvipatara nemasangano emabhizinesi. KHN inotaura nezvebhiri muNew Jersey iyo inoita kuti zvive nyore kune vashandi vanokosha vakawana COVID-19 panguva ye emergency kuti varatidze kuti vakaiwana pabasa.
Chrissy Buteas ndiye mukuru wehurumende anoona nezvekufambiswa kwemabasa kuNew Jersey Business & Industry Association, iyo inopikisa bhiri iri, iro rakapasiswa nedare reSeneti uye rakamirira muGeneral Assembly. "Zvinotinetsa ndezvekuti mutengo wezvaanotaura izvi unogona kukurira hurongwa uhu, hwakanga husina kugadzirirwa kutora mari panguva yedenda repasi rose," anodaro Buteas.
KHN inotarisawo nyaya iri muVirginia umo mubatsiri wechiremba (PA) uyo akapa bvunzo dzeCOVID aifanira kuiswa muchipatara paakauya nechirwere ichi kwevhiki, uye akakuvara asipo mavhiki mashanu ebasa.
Iyo PA yakakumbira kuzadza mafomu ekubhadharisa vashandi. Akarambirwa mafomu uye akabva amiswa basa mushure memazuva mashanu, aine chikwereti chemadhora zviuru makumi matanhatu. Gweta Michele Lewane anomiririra PA mune iyi kesi. Sekureva kwa KHN: "Lewane akati mutemo muVirginia ungangotarisa COVID-19 'sehosha yakajairika yehupenyu,' zvakafanana nechikosoro kana dzihwa. Akati aifanira kuratidza ne "humbowo hwakajeka uye hunogutsa" kuti akabata coronavirus kubasa. "
Post nguva: Jul-21-2020